HomePage – Masonry Layout – SoShwe
So Shwe 8 hours ago	0
Samsung ချစ်သူတွေအတွက် အတန်ဆုံး၊ အမိုက်ဆုံး၊ အကြမ်းဆုံးပစ္စည်းတွေကို ရောင်းချပေးမယ့် “Samsung LIVE Sales” ကြီးလာပါပြီနော် . . . ဇူလိုင် (၁) …
So Shwe 10 hours ago	0
လစာထုတ်ပြီးမှ ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ Samsung ချစ်သူတို့အတွက် လစာလဲရ . . . Promotion လဲရ . . . ဒါတွေအပြင် ငွေကျပ် …
So Shwe 11 hours ago	0
Liverpool မှာ မိသားစုနဲ့အတူနေထိုင်တဲ့ အသက် ၉ နှစ်အရွယ် Noah Whitehead ဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ သူနဲ့သက်တူအရွယ်တူ ကလေးငယ်အချို့က ချို့တဲ့နွမ်းပါးတဲ့မိသားစုမှာ မွေးဖွားလာပြီး အဟာရရှိတဲ့ …
admin 15 hours ago	0
အိမ်အသစ်ရှာဖွေနေသူ ဒါမှမဟုတ် အိမ်ပြောင်းနေဖို့ စိတ်ကူးနေတယ်ဆိုရင်တော့ အခုဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ရှုပေးဖို့ အကြံပေးပါရစေ။ အခုခေတ်မှာတော့ လူမှုကွန်ရက်ကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုလာကြပြီမို့ အိမ်အသစ်ရှာနေသူတွေကလည်း လူမှုကွန်ရက်ကနေပဲ ကိုယ်နေလိုတဲ့အိမ်လေးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါပြီ။ ဒါကြောင့် …
So Shwe 15 hours ago	0
အိပ်ရင်းနဲ့ဟောက်တတ်သူတွေကြောင့် သူ့ရဲ့ဘေးမှာအိပ်တဲ့သူတွေက အိပ်ရေးပျက်ရတယ်ဆိုပေမယ့် အိပ်နေရင်းနဲ့ဟောက်တတ်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်လည်း ဆေးကုသမှုမခံယူဘူးဆိုရင် အသက်အန္တရာယ်ကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အိပ်နေရင်းနဲ့ဟောက်ရာကနေ အသက်ရှူရပ်တန့်သွားတာမျိုး ဖြစ်ပေါ်တတ်တာကြောင့်ပါ။ အိပ်နေရင်းနဲ့ဘာကြောင့် ဟောက်သလဲ? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက် …
Demi Lovato နဲ့ Selena Gomez တို့နှစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးဟာ သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများကြောင့် ပိုမိုဝေးကွာသွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးရဲ့အဆိုအရ “Demi နဲ့ Selena …